Khasaare soo kala gaarey 2dii dhinac ee dagaalka ku dhexmarey qeybo ka mid ah gobolka Jubbada Hoose – idalenews.com
Khasaare soo kala gaarey 2dii dhinac ee dagaalka ku dhexmarey qeybo ka mid ah gobolka Jubbada Hoose
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaalo lagu riiqmay oo shalay ilaa xalay ka dhacayay deegaano ka tirsan Jubada Hoose, kaasoo u dhaxeeyay Ciidamada huwanta iyo dagaalyahanada Shabaab.
Dagaaladan oo ahaa mid ka mid ah dagaaladii ugu cuslaa ee soo mara Gobolkaas, ayaa dhinacyada dagaalamay ay guulo kala duwan kala sheeganayaan, iyadoo xaalad hubaal la’aan ah ay ka jirto degmada Afmadow, markii gudaha ay u galeen shalay gelinkii dambe gudaha u galeen Al-Shabaab.
Saraakiil ka tirsan Shabaab ayaa sheegay in degmada Afmadow ay la wareegeen, markii weerar dhabar jebin ku qaadeen, markii Ciidamada Kenya oo watay ilaa 56-gaadiidka dagaalka oo ku soo wajahnaa deegaanka Janaay Cabdalla oo qasadkooda ahaa inay gaaraan shalay galabkii.
Waxaa ay sheegeen in labo ka mid ah diyaaradaha kuwa qumaatiga u kaca ay gubeen iyo afar gaadiidka gaashaaman, oo labo ka mid ah ay gacanta ku dhigeen.
Sidoo kale waxaa ay sheegeen in labaatameeyo askari ka dileen, iyagoo xusay in saxaafada ay u soo bandhigayaan muuqaalada dagaalkii shalay.
Jen. Ismaaciil Saxardiid oo ah Taliyaha Ciidamada dowladda ee ku sugan Jubooyinka ayaa sheegay in aanay waxba ka jirin wararka sheegaya in laga qabsaday Afmadow, isagoo cadeeyay inay u jiraan Kismaayo ilaa 60-KM sida uu yiri.
“Waa been waxba kama jiraan, Afmadow lama qabsan, nimankii ayaga jab soo gaaray, Kismaayo maalmo iga xiga, waxaa wali taaganahay meeshii aan ku sugneyn ee ugu yaraan 60-KM u jirto”ayuu yiri Jen. Saxardiid oo intaa ku daray inay ku laayeen dagaalyahano ka tirsan Shabaab.
Xaalada deegaanadii lagu dagaalamay ayaa saaka la soo sheegayaa inay degan yihiin, iyadoo ay jirto dhaq dhaqaaqyo ciidan iyo abaabul dagaal.
Ma jirto warar ka madax banaan sheegashada labada dhinac, inkastoo la sheegayo in qasaare ballaaran uu geystay dagaaladii shalay ka dhacay deegaanada u dhaxeeya Afmadow iyo Kismaayo.
Bisha September 10keeda oo la qabanaayo Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya
Howsha Guddiga Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya oo la soo bandhigey